Uhlelo lokubambisana lweFlirtymania - thola imali nathi!
Thola ngokuletha abasebenzisi ku-chatroulette noma umane uyengeze endaweni yakho!
Uhlelo lokubambisana lwengxoxo yevidiyo
Mema ababukeli namantombazane afuna ukuhola ngokusakazwa. Sizokusiza ukuthi uthole inzuzo ephezulu kusuka kuwo wonke umkhondo - ugqugquzelwa okuqukethwe, indali kanye neposi.
IFlirtymania isebenza kwiziphequluli kuwo womabili ama-PC namadivayisi eselula. Sebenzisa noma yiluphi uhlobo lwethrafikhi olufunayo ukuze unyuswe
abasebenzisi nsuku zonke
umholo ojwayelekile ovela ku-1 lead
kusuka ku- $ 200
ngenyanga ukusuka kumphathi wewebhusayithi oxhumene naye noma umsakazi
Kunokusakaza okuningi kwamahhala engxoxweni yethu yevidiyo. Noma kunjalo, okuqukethwe okushisa kakhulu kutholakala kuphela ngemuva kokukhokha.
Izingcingo eziyimfihlo nezijwayelekile
Izingcingo ezizimele nezingxoxo zevidiyo zikhokhwa ngomzuzu.
Abasebenzisi bakhokhela imisebenzi ukuze bakwazi ukucela intombazane ukuthi izithele ngamanzi noma igxume.
Uyakhokhela ukubukela ukusakazwa okudumile, izithombe namavidiyo.
Shintsha ababukeli bakho babe abalandeli futhi uthole imali engu-100% yemali ekhishelwayo.
Ungayithola kanjani imali lapha
Abalingani bethu bayazuza kukho konke ukuthengwa okwenziwe ngabasebenzisi abaxhumana nabo. Futhi uzokhokhelwa abahambisanayo be-imbasters nabasakazi.
Sabalalisa isixhumanisi sakho esixhumene naye noma ushumeke ingxoxo yethu yevidiyo kusayithi lakho ukuze uqale ukuhola.
kusuka kuzinkokhelo zabasebenzisi abaxhumana nabo, akukho mkhawulo wesikhathi
kusuka kwabasakazi abaxhumana nabo 'kanye nokukhokhwa kwe-webmasters'
Sebenzisa i-VISA, i-Mastercard, i-PayPal, i-Yandex, i-QIWI, i-SEPA, izinsizakalo ze-Bitsafe noma uthole i-invoyisi yokukhipha imali.
Ungasebenzisa imali oyitholile engxoxweni yevidiyo.
Nyusa ingxoxo yakho yevidiyo emakethe oyaziyo
Abalingani bethu banokukhetha okubanzi kwamazwe okunyuswa. Uhlelo lokusebenza lihunyushelwa kuzo zonke izilimi ezidumile, kufaka phakathi ezeMiddle East.
Ukuthumela imiyalezo ngokuzenzakalelayo olimini lomuntu owamukelayo kuvumela ukuhlanganisa ithrafikhi evela emazweni ahlukene ngaphandle kwezinkinga zokuqonda.
Umhumushi owakhelwe ngaphakathi
Vula isiza sakho sewebhu sewebhu
Ungakha ingxoxo yethu yevidiyo kusayithi lakho noma uyidale kusuka ekuqaleni; akukho maki odingekayo, khetha kuphela isilinganiso sobudala bokuqukethwe kwakho: 12+, 14+, 16+ noma 18+.
Iyatholakala kuwo wonke amapulatifomu
IFlirtymania ingxoxo yevidiyo eguquguqukayo esebenza kunoma yisiphi isiphequluli kuwo wonke amadivayisi. Hlanganisa ithrafikhi evela kumakhompyutha amaningi, ama-smartphones noma amaphilisi ukuzama ukunikezwa okuhlukahlukene.
Ukuxhumana kwe-Google Analytics
Faka ikhawuntari yakwaGoogle Analytics kumakhasi avakashelwe yinkomba ukuthola imininingwane mayelana nokuguqulwa nokuthengiwe.
Sisebenzisana nabanikazi bamasayithi athumela izikhangiso kanye nezixhumanisi zohlelo lwethu lokusebenza. Singanikeza ngemibandela enenzuzo ngisho nomthombo omncane onezithameli ezithandekayo nezisebenzayo.
Sibhalele ku: support@flirtymania.com
Silungiselele zonke izinto zokwakha zephromo ukuze uqale kalula. Manje akudingeki uchithe isikhathi ukuzakhela ngokwakho. Landa iphakheji oyifunayo bese uqala ukukhuthaza!